A+ exam Question & Answer — MYSTERY ZILLION
A+ exam Question & Answer
October 2009 edited February 2011 in Hardware
အစ်ကို တိုရေ ကျွန်တော် A+ exam အတွက် Question & Answer လေးတွေလို ချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
၁။	What doesa28 pot pitch refer to in describingamonitor?
A.	28cm wide
B.	28 millimeter wide
C.	28 cm apart
D.	28 millimeter apart
28 dot pitch ဆိုတာ dot တစ်ခုနဲ့တစ်ခုအကွာအေ၀း 28 millimeter ပမဏကိုဆိုလိုတယ်။ A နဲ့B မှာပေးထားတဲ့ wide ဆိုတာက dot တစ်ခုချင်းရဲ့ အကျယ်ပမဏကို ဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်။ အကွာအေ၀းကို ပြောတာမဟုတ်ဘူး။ C ကလည်း dot pitch ကို cm နဲ့ တိုင်းတာနေလို့ မှားပါတယ်။ Dot picth ကို milimeter နဲ့ပဲတိုင်းတယ်။
အဖြေမှန် - D
၂။	Which of the following configuration settings are set in EEPROMS onaNIC?
D.	I/O Address
E.	MAC address
NIC ပေါ်က EEPROMS ဆိုတာ IRQ, I/O address နဲ့ MAC address တွေကိုပဲ ကိုယ်စားပြုတယ်။ B နဲ့ C က Protocol နဲ့ IP address ဆိုတာက Operating System ကို ကိုယ်စားပြုတယ်။ EEPROM နဲ့မဆိုင်ပါဘူး။
အဖြေမှန် - A,D,E
၃။	What is the main difference between AT and ATX motherboards?
A.	PS/2 port
B.	BNC connector
C.	Soft power switch
D.	Serial connectors
E.	Parrel connectors
AT motherboard တွေပဲ (ATX motherboard မဟုတ်) PS/2 port နဲ့ Soft power switch တွေကို အထောက်အကူပြုတယ်။ မေးခွန် B က BNC connector ဆိုတာက Network adapter တွေကို bus network နဲ့ဆက်သွယ်တာကိုပြောတာပါ။ AT motherboard တွေပေါ်မှာ BNC connector ကို built-in အနေနဲ့မပါဘူး။ မေးခွန်း D က Serial connector ဆိုတာက AT နဲ့ ATX motherboard နှစ်ခုစလုံးမှာပါတယ်။ မေးခွန်း C က parallel ဆိုတာကလည်း AT နဲ့ ATX motherboard နှစ်ခုလုံးမှာပါတယ်။
အဖြေမှန် - A,C
၄။	Which of the following source presentarisk factor for virus infection onaPC?
A.	A floppy disk received fromafriend
B.	A downloaded file from the internet
C.	FDISK/MBR file on the hard drive (FDISK/MBR ဆိုတာက master booth sector ကိုရှင်းလင်းတာ။)
D.	DLL file that was loaded withanew machine
E.	CAB file that was loaded with the new machine
Floppy disk တွေနဲ့ Internet download ကနေ download လုပ်ထားတဲ့ ဖိုင်တွေကနေပြီး Virus တွေကူးစက်နိုင်ပါတယ်။ မေးခွန်း C က FDISK/MBR ဆိုတာက master booth sector ကိုရှင်းလင်းတာ။ မေးခွန်း D က .DLL နဲ့ .CAB ဆိုတာက execute လုပ်တဲ့ ဖိုင်တွေ မဟုတ်ဘူး။ ဒါကြောင့် Virus မပါနိုင်ပါဘူး။
အဖြေမှန် - A,B
၅။	A bent pin onathree row DB-15 male connector plug could cause problems with which device or component? ( အတန်း ၃တန်းနဲ့ pin 15 ချောင်းပါတယ်ဟာ အောက်ပဖော်ပြထားတဲ့ အရာတွေက ဘယ်ဟာဖြစ်ပါသလဲ။)
B.	Joy sticks
C.	Laser-Jet Printer
D.	External Modem
မော်နီတာ port ဆိုတာက အတန်း ၃တန်းနဲ့ pin ၁၅ချောင်းပါတယ်။ မေးခွန်း B မှာ ပြောထားတဲ့ games/joystick port ဆိုတာ ကတော့ Pin ၁၅ချောင်းပါပေမဲ့ အတန်း ၂တန်းသာပါတယ်။ C က printer ဆိုတာက Parallel interface နဲ့သုံးတယ်။ D က external modem ဆိုတာ serial interface အနေနဲ့သုံးတာဖြစ်ပါတယ်။
အဖြေမှန် - A
၆။	Which ports are most often used to connectadigital camera toacomputer? (ဒစ်ဂျစ်တယ် ကင်မရာနဲ့ကွန်ပြူတာကို ဘယ် port တွေနဲ့ဆက်သွယ်လို့ရလဲ။)
A.	USB Port
B.	SCSI Port
C.	PS/2 Port
D.	Parallel Port
E.	RS-232 Port
နောက်ပေါ်လာတဲ့ USB နဲ့ယခင်သုံး RS-232 serial interface တွေ နှစ်မျိုးစလုံးကို ကင်မရာနဲ့ကွန်ပြူတာ ချိတ်ဆက်ရာမှာ အသုံးပြုပါတယ်။ SCSI ဆိုတာက ဒစ်ဂျစ်တယ် ကင်မရာတွေမှာ မသုံးဘူး။ PS/2 ဆိုတာ kayboard and mouse အတွက်ပဲ သုံးတယ်။ Parallel interface တွေကို ဒစ်ဂျစ်တယ်ကင်မရာတွေမှာ သုံးလေ့မရှိပါဘူး။
အဖြေမှန် - A,E
၇။	A video resolution of 800 into 600 would consitute which video mode?
800 x 600 ဆိုတာက SVGA mode ပါ။ EGA နဲ့ CGA တို့ဟာ ဟိုးအရင်ကပေါ်ခဲ့တဲ့ old standard တွေ။ Resolution နိမ့်တယ်။ ခုခေတ်မှာ အသုံးမပြုတော့ပါဘူး။ VGA mode ကတော့ 640 x 480 ပဲရှိပါတယ်။
၈။	Which device would you plug intoaAGP slot?
(AGP slot ကဘယ် device မှာအသုံးပြုသလဲ။)
B.	Serial port
C.	Video card
D.	External storage device
AGP port ဆိုတာ video card မှာပဲသုံးတယ်။ Hard Disk ကို IDE သို့မဟုတ် SCSI interface တွေနဲ့သုံးရတယ်။ Serial Port ဆိုတာက slot တိုင်းမှာ တပ်လို့မရဘူး။ External storage တွေကတော့ USB, SCSI, parallel interface တွေနဲ့သုံးပါတယ်။ AGP slot မှာ မသုံးပါဘူး။
အဖြေမှန် - C
၉။	What should you do fist if the mouse pointer is not moving corectly across the screen? (Mouse pointer က screen ပေါ်မှာ မရွေ့လျားတော့ဘူးဆိုရင် ပထမဆုံး ဘာလုပ်သင့်သလဲ။)
A.	Clean the mouse
B.	Reconfigure the system
C.	Plug intoadifferent port
D.	Check the mouse drives in the operating system
ဖြစ်နိုင်တာကတော့ mouse ကို သန့်ရှင်းဖို့လိုနေပြီ။ ပထမဦးဆုံး mouse ကိုသန့်ရှင်းကြည့်လိုက်ပါ။ မေးခွန်း B နဲ့ D က Configure problems မဟုတ်လို့၊ System အမှားလည်း မဟုတ်လို့ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ C ကလည်း တစ်ခြားရွေးစရာ port မရှိလို့မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် သန့်ရှင်းရေးပဲ လုပ်ကြည့်ပါ။
၁၀။	A workstation has just been installed on the Ethernet LAN but cannot communicate with the network.What should you do first? (Network ချိတ်ဆက်လို့မရဘူးဆိုရင်ဦးစွာဘာလုပ်သင့်သလဲ။)
A.	Reinstall the network protocols
B.	Reinstall the network interface card driver
C.	Varify the IP configuration on the workstation
D.	Verify the link status on the computer’s network card
ပထမဦးဆုံး စစ်ဆေးသင့်တာက တပ်ထားတဲ့ပုံစံမှန် မမှန် ဦးစွာစစ်ဆေးသင့်တယ်။ Adapater တပ်ဆင်ပုံမှန်မှှ ကျန်တဲ့အပိုင်းတွေကို လုပ်ရမှာ။ ကတ်တပ်ဆင်ပုံမှန်တာနဲ့ကွန်ပြူတာက driver လိုရင်တောင်းမယ်၊ လမ်းကြောင်းတွေထပ်တောင်းရပ်တောင်းမယ်။ ဦးစွာဘာလုပ်သင့်သလဲလို့ မေးထားတဲ့အတွက် ကတ်ကို အရင်စစ်ဆေးလိုက်ပေါ့။
၁.	A customer just installedanew CD-RW. The system was working fine before the installation, but now the CD-RW does not work. What should you suggest that the customer should do?
A.	Flash or upgrade the BIOS
B.	Check the CONFIG.SYS setup
C.	Add the CD-RW in the device manager
D.	Check the jumper setting on the CD-RW
CD-RW အများစုဟာ IDE ကြိုးတွေနဲ့တပ်ကြတာများတယ်။ ခေတ်သစ်ကွန်ပြူတာတွေမှာ IDE ပေါက်နှစ်ပေါက်မှာ ကြိုးတစ်ချောင်းနဲ့ပစ္စည်းနှစ်မျိုးကို ဆက်သွယ်လို့ရတယ်။ ဥပမာ - ကြိုးတစ်ချောင်းနဲ့ hard disk နှစ်လုံး သို့မဟုတ် CD-ROM နှစ်လုံးတပ်လို့ရတယ်။ တစ်ခုက master ဖြစ်မယ်။ နောက်တစ်ခုက slave ဖြစ်မယ်။ အရေးကြီးတာက Master နဲ့ slave ဆိုတာ Jumper နဲ့ setting ပြောင်းပေးရတယ်။ တကယ်လို့ ကြိုးတပ်မှားရင်၊ Jumper မှားရင် အလုပ်မလုပ်နိုင်ဘူး။ မေးခွန်း A မှာက BIOS ကို upgrade လုပ်လိုက်တိုင်း IDE ကိုတိုက်ရိုက်မသက်ရောက်နိုင်ပါဘူး။ မေးခွန်း B ရဲ့ config.sys ဆိုတဲ့ command မှာ device driver တွေမပါဘူး။ config.sys ကို Operating System အတွက်သာသုံးတယ်။ မေးခွန်း C ကတော့ CD-RW ကို Device Manager မှာလည်း မတွေ့ရဘူးဆိုတာကတော့ drive ကိုမသိမှတော့ ဘယ်တွေ့နိုင်ပါမလဲ။ ဒါကြောင့် Jumper setting ကိုစစ်သင့်ပါတယ်။
၂.	When installing an ISA Modem it would be good practice to know available _____ and _____ before installing the modem. (select two)
B.	COM Ports
C.	ISA address
D.	IRQ number
Modem ဆိုတာ serial port နဲ့အသုံးပြုရတယ်။ Serial port ဆိုတာ COM port ပါ။ COM port တိုင်းမှာ IRQ နံပါတ်ရှိတယ်။ မေးခွန်း A က Modem ဟာ SCSI နဲ့ အသုံးမပြုရဘူး။ မေးခွန်း C က ISA address နဲ့လည်း မဆိုင်ဘူး။
၃.	A client wants to upgrade the storage inacomputer. The original drive is working, just the owner needs additional free space. The technician installsanew 40GB ATA Hard drive in the system. It can be heard spinning up, but the drive is NOT recognized by the systemвЂ™s BIOS. Select the MOST likely problems. (Select Two)
A.	Faulty Hard drive
B.	Incompatible Operating System
C.	Drive capacity too large for BIOS
D.	SCSI bus are terminated, not IDE channels
Hard Disk မှာ အမှားတစ်ခုခု ဖြစ်နေလို့ပါ။ ဒါမှမဟုတ် BIOS ကလက်ခံနိုင်တဲ့ ပမဏထက် ကြီးနေလို့လည်းဖြစ်နိုင်တယ်။ မေးခွန်း B က Operating System ဟာ hard disk နဲ့ တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်မှုမရှိဘူး။ မေးခွန်း D က SCSI bus နဲ့ IDE channel တွေဟာလည်း မသက်ဆိုင်ဘူး။
၄။	Which of the following will allow you to usealaptop asadesktop system? (Select two)
A.	External Hard Drive
B.	Port Replicator
C.	Hot Swappable drive
D.	Docking station
E.	Home base
မေးခွန်း B က Port Replicator ဆိုတာက PC port တိုင်းမှာပါတတ်တယ်။ Serial နဲ့ parallel port တွေကို replicator လို့ခေါ်တယ်။ ခရီးဆောင် ကွန်ပြူတာတွေမှာလည်းပါတယ်။ ဒီ port တွေကို ထည့်ထားရတဲ့အကြောင်းအရင်းက ခရီးဆောင်ပစ္စည်းတွေအပြင်၊ ခရီးဆောင်လို့မဖြစ်နိုင်တဲ့ ပရင်တာနဲ့မော်နီတာတွေကိုလည်း အလွယ်တကူ တပ်ဆင်အသုံးပြုနိုင်အောင်ဖြစ်ပါတယ်။ ခရီးဆောင် ကွန်ပြူတာတွေကို အိမ်မှာလည်းအလွယ်ဆုံး၊ ရုံးလည်းယူသွားပြီးသုံးတဲ့အခါ ပစ္စည်းမျိုးစုံနဲ့တပ်ဆင် အသုံးပြုနိုင်အောင် replicator တွေကို ထားရတယ်။
မေးခွန်း D က Docking station ဆိုတာက ခရီးဆောင်ကွန်ပြူတာတွေမှာ အပိုတပ်ဆင်အသုံးပြုနိုင်တဲ့ ပစ္စည်းကိုပြောတာ။ သူ့မှာ slot တွေပါပြီး expansion ကတ်တွေကို ထပ်စိုက်လို့ရတယ်။ Hard disk အပိုတွေထည့်ထားတဲ့ bay တွေကို ထပ်စိုက်လို့ရတယ်။ Printer, Monitor ဆိုတဲ့ ပြင်ပပစ္စည်းတွေနဲ့ လည်းဆက်သွယ်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ Docking station ကိုသုံးပြီး laptop computer ကို desktop computer ပုံစံအဖြစ်ပြောင်းလဲသုံးနိုင်တယ်။ Monitor အကြီးနဲ့မတွဲဘဲဖြုတ်လိုက်ရင် laptop အဖြစ်ပြန်သုံးနိုင်တယ်။ Docking station ကိုထားရတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်က laptop အနေနဲ့သုံးရတာ အားမရရင် မော်နီတာအကြီး၊ ကီးဘုတ်၊ မောက်စ်တွေနဲ့ ပူးတွဲသုံးနိုင်ဖို့ စီစဉ်ထားခြင်းဖြစ်တယ်။ Laptop ကနေ desktop ကိုပြောင်းသုံးရာမှာ မေးခွန်း A က external hard drive ဆိုတာ မလိုအပ်ဘူး။ မေးခွန်း C ကလည်း ဆက်စပ်မှုမရှိပါဘူး။
၅။	When installinganew video card inasystem which previously used an onboard video controller needs to be:
A.	Disabled in the windows control panel
B.	Disabled in the BIOS
C.	Physically removed
D.	Disable using the jumper pin on the new video card
BIOS ထဲကနေ onboard video controller ကို disable လုပ်ထားဖို့လိုပါတယ်။
၆။	Identify the I/O port described below. An external D shaped connectors withatotal of 15 female pins in3rows.
A.	Parallel Port
C.	VGA Video Port
D.	Joy Stick-MIDI Port
E.	USB Port
Monitor port ဟာ လိုင်း (၃)လိုင်းနဲ့ pin ၁၅ချောင်းရှိပါတယ်။
1. Which of the following is the MOST common hot-swappable technology used for adding peripheral devices for storage, communication, and other I/O components in portable computers?
A. PCMCIA B. 802.11b
C. CD-RW D. Serial
ခရီးဆောင်ကွန်ပြုတာတွေမှာ သိုလှောင်ပစ္စည်း၊ ဆက်သွယ်ရေး၊ Input / Output ပစ္စည်းတွေ တပ်ဆင်မယ်ဆိုရင် အများဆုံးအသုံးပြုလေ့ရှိတဲ့ နည်းပညာကို ဘယ်လိုခေါ်ပါသလဲ။
2. You areatechnician at Certkiller. Your newly appointed Certkiller trainee wants to know what the RS-232 interface onaprinter is also known as .
A. The Centronics B. The Parallel
C. The SCSI D. The Serial
ပရင်တာပေါ်က RS-232 interface နဲ့ဆက်သွယ်ရတာကို ဘာလို့ခေါ်သလဲ။
3. You areatechinician at Certkiller. Your newly appointed Certkiller trainee wants to know how many devices can you connect toaIEEE 1394 (FireWire) port. What would your reply be?
A. 10 B. 50 C. 63 D. 126
IEEE 1394 (FireWire) port နဲ့ပစ္စည်းဘယ်နှမျိုးလောက်ဆက်သွယ်လို့ရသလဲ။ ဆက်သွယ်ကြိုးအရှည်ကိုတော့ ၁၅ပေလို့သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ Bus ပေါင်း 1023 လို့သတ်မှတ်ထားပြီး၊ bus တစ်ခုမှာ nod ပေါင်း 63 ခုရှိတယ်။
4. You are the technician at Certkiller. Your CEOвЂ™s system shuts down after running for about 10 minutes. The BIOS reports the CPU fan RPM of 0. What is the problems?
ကိုယ်အထက်လူကြီးရဲ့ကွန်ပြူတာက ၁၀မိနစ်လောက်ဖွင့်ပြီးတာနဲ့ ပြန်ပိတ်သွားတယ်။ BIOS ကလည်း CPU ပန်ကာက RPM မှာ0ပြနေတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲ။0ပြနေမှတော့ ပန်ကာကို လဲဖို့လိုပြီပေါ့။
5. You installaCardBus PCMCIA network adapter inalaptop by the system does not recognize the card. What should you do first when troubleshooting this problems?
A. Try the network adapter in another slot.
B. Tryanon CardBus network adapter.
E. Add more RAM.
Laptop ကွန်ပြူတာမှာ PCMCIA ကတ်နဲ့ network ကိုသုံးဖို့ပြင်ဆင်တယ်။ System က ကတ်ကိုမသိဘူးဖြစ်နေ တယ်။ ပြဿနာကိုဘယ်စပြီး ဖြေရှင်းမလဲ။ Slot တစ်ခုမှာစိုက်လို့ အဆင်မပြေရင် နောက် slot တစ်ခုမှာပြောင်းတပ်ကြည့်လေ။
6.	A customвЂ™s keyboard stops working. You replace the keyboard one that you know is good. However, the keyboard is still not recognized by the system. What could be the problems?
A.	SETUP was not run.
B.	The processor is overheating.
C.	The BIOS needs to be flashed.
D.	The keyboard controller is not working.
ကီးဘုတ်အလုပ်မလုပ်ဘူး။ ကောင်းမယ်ထင်တဲ့ ကီးဘုတ်နဲ့ပြောင်းတယ်။ ဒါလည်း ထပ်မသိဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲ။ ဖြစ်နိုင်တာက ကီးဘုတ်ကြောင့်မဟုတ်နိုင်ဘူး။ ကီးဘုတ် controller ကြောင့်ပဲဖြစ်နိုင်တယ်။
7.	You are the technician at Certkiller. Your CEO complains aboutaslow connection to the internet. The CEO is usinga56Kbps Modem. Which of the following are the most likely causes of this problems? (choose two)
A.	An IRQ conflict
B.	Insufficient RAM
C.	Out dated modem drive
D.	Noise on the telephone line
E.	Modem on wrong serial port
ကိုယ်လူကြီးက အင်တာနက်သုံးရတာ နှေးတယ်လို့ပြောနေတယ်။ သူသုံးနေတာက 56Kbps Modem ပါ။ အဖြစ်နိုင်ဆုံး ပြဿနာကဘာလဲ။ (နှစ်ခုရွေးပေးရမယ်။) မိုဒမ် driver ကခေတ်မမီတော့ဘူး။ ဒါကြောင့် speed နှေးတာ။ နောက်တစ်ချက်ကလည်း noise ဖြစ်နေတဲ့ တယ်လီဖုန်းလိုင်းကို သုံးရင်လည်း speed နှေးတဲ့အပြင် data တွေကို အပြောင်းအရွေ့လုပ်ရာမှာ အတင်းတွန်းပြီး လုပ်နေရသလိုဖြစ်နေတဲ့အတွက် နှေးရတာဖြစ်ပါတယ်။
8.	Certkiller hasaPC withaSCSI chain that currently support six hard drives,aDVD-ROM drive andaCD-RW drive. What is unique about each device on the chain?
A.	I/O	B.	Identification	C.	Master or Slave.
SCSI က ဟာ့ဒ်ဒစ် ၆လုံးနဲ့ DVD-ROM drive တစ်လုံး၊ CD-ROM drive တစ်လုံးကို ဆက်သွယ်လို့ရတယ်။ အဲဒီလို drive တွေ ဆက်သွယ်နိုင်တာကို unique အနေနဲ့ ဘာလို့ခေါ်သလဲ။ Drive တွေကို ခွဲခြားပြီး သက်သေခံနိုင်ဖို့ identification လိုပါတယ်။ SCSI က network လိုလည်း ဆက်စပ်နေတာကြောင့် တပ်ဆင်ထားတဲ့ drive တိုင်းမှာ သူ့ကိုယ်ပိုင် unique address လိုတယ်။ SCSI နဲ့ဆက်တဲ့ device တိုင်းမှာ ID နံပါတ်ရှိရတယ်။ ဒါမှလည်း ID တွေထပ်မနေမှာဖြစ်ပါတယ်။
9.	A user is experiencing on/off/on connection problems withanewly added USB network adapter onaLaptop/ Notebook. The Laptop/ Notebook has the following additional devices attached.
1 Firewire connected hard disk
1 Firewire connected CD-Writer
1 Parallel Port connected Printer
Which one of the following is the MOST possible explanation of the problem?
A.	IRQ conflict with USB modem
B.	Power Consumption conflict with Firewire devices
C.	RF (Radio Frequency) interface from external monitor.
D.	I/O address conflict with the parallel printer.
ကွန်ပြူတာသုံးစွဲသူတစ်ယောက်မှာ on / of / on ဆိုတဲ့ ဆက်သွယ်မှုဆိုင်ရာ ပြဿနာရှိတတ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့်တော့ USB network adapter အသစ်တစ်ခုကို laptop မှာတပ်ရင်းဖြစ်သွားတာပါ။ သူ့ laptop မှာတပ်ထားတာတွေကိုလည်း အထက်မှာဖော်ပြထားပါသေးတယ်။ အဲဒီလောက်ပစ္စည်းတွေများနေမှတော့ ဖြစ်နိုင်တဲ့ ပြဿနာဟာ Firewire device တွေပါ၀ါစားသုံးမှုကြောင့်ဖြစ်ရတာပါ။
10.	A technician getsacall fromauser who is complaining of floppy disk losing the information stored on them. The technician goes userвЂ™s desk and finds the userвЂ™s disk on the top of their monitor. What is the portable cause?
A.	The user keeps deleting the files or is not saving
B.	The diskettes are bad
C.	The floppy drive is going bad
D.	The magnetic field from the monitor is erasing the diskettes.
Floppy နဲ့ဒေတာတွေကိုထည့်ရတာ ပြဿနာဖြစ်နေတယ်။ သူအဲဒီ Floppy ကို မော်နီတာပေါ်မှာတင်ထားပြီးမှ ယူသုံးလိုက်တာ မသိဘူးဖြစ်နေတာပါ။ ဘာကြောင့်ပါလဲ။ ဖြစ်နိုင်တာက မော်နီတာပေါ် တင်ထားလို့ပါ။ မော်နီတာမှာရှိတဲ့ သံလိုက်စက်ကွင်းမိသွားပြီး Floppy ကပျက်သွားပါပြီ။
1...A , 2...D , 3...C , 4...A , 5...A , 6...D , 7...C,D , 8...B , 9...B , 10...D
11.	A user complains thatacomputer monitor experiencingajitter. Replacing the monitor and video card does not fix the problems. Which of the following could be causing the problems?
A.	ESD (Electrostatic Discharge)
C.	EMI (Electromagnetic Interference)
ပြဿနာဖြစ်နေတာက မော်နီတာတုန်နေတယ်။ မော်နီတာ နောက်တစ်လုံးလဲတယ်။ ဒီအတိုင်းဆက်ဖြစ်နေတယ်။ ဗီဒီယိုကတ်ကိုလဲကြည့်တယ်။ မထူးဘူးဖြစ်နေတယ်။ ဘာကြောင့်ဖြစ်ရတာလဲ။ မော်နီတာပတ်၀န်းကျင်မှာ လျှပ်စစ်သံလိုက်အားကို ဖြစ်စေတဲ့ ပစ္စည်းတစ်မျိုးမျိုးရှိနေလိမ့်မယ်။ ဥပမာ - အဲယားကွန်း သို့မဟုတ် မီးအားမြင့်စက် လိုမျိုးပေါ့။ အဲဒီပစ္စည်းတွေနဲ့ကွန်ပြူတာကို ေ၀းအောင်ထားပြီ ပြန်စမ်းကြည့်ပါ။
12.	A user hasaPentium class system board withabuilt-in Hard drive controller. The user decides to upgrade the Hard drive and purchasesa10GB ATA 100 drive. The drive is installed and the user reports that the BIOS does NOT recognize the drive. What could be wrong?
A.	The system board does not support the drive
B.	The drive jumpers need to be changed to ATA 33
C.	The wrong Hard drive BIOS driver was installed
D.	The Hard drive is not properly grounded.
Pentium အမျိုးအစား system board ကိုသုံးတယ်။ ဟာ့ဒ်ဒစ် controller က built-in ဖြစ်နေတယ်။ သုံးသူက ဟာ့ဒ်ဒစ်ကို မြှင့်ချင်လို့ 10GB ATA 100 တစ်လုံး၀ယ်လာတယ်။ ဟာ့ဒ်ဒစ်ကို တပ်လိုက်ပြီးချိန်မှာ ကွန်ပြူတာကိုဖွင့်လိုက်တော့ BIOS ကိုမသိဘူးဖြစ်နေတယ်။ ဘာကြောင့်လဲ။ အဲဒီ system board ကဒီလောက်များတဲ့ ဟာ့ဒ်ဒစ်ပမာဏကို မသိနိုင်ပါဘူး။
13.	A user reports that when turning on the PC an error message вЂњkeyboard is lockedвЂќ is displayed. The user needs to be able to use the PC. What should be done to fix problems?
A.	Turn the key lock on the chassis
B.	Replace the Keyboard
C.	Push the unlock key on the keyboard
D.	Unplug the keyboard and plug it back in.
ကွန်ပြူတာဖွင့်လိုက်ချိန်မှာ вЂњkeyboard is lockedвЂќ ဆိုတဲ့စာတမ်းပေါ်လာတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲ၊ ဘယ်လိုပြင်ရမလဲ။ တချို့ကွန်ပြူတာတွေရဲ့ပုံးရှေ့မှာ key lock ဆိုတာပါတယ်။ အဲဒီ key ကို lock လုပ်ထားလို့ ဒီလိုဖြစ်နေရတာပါ။ Lock ကိုပြန်ဖြုတ်လိုက်ပါ။ System boot တက်နေချိန်မှာ ကီးဘုတ်ပေါ်က ကီးတစ်ခုခုကို သွားမနှိပ်လိုက်ပါနဲ့။ ကီးကို Lock လုပ်ထားရင်၊ unlock ပြန်လုပ်လိုက်ပါ။ မားသားဘုတ်တစ်ခုခုဖြစ်ရင်လည်း ဒီလိုစာတမ်း ပေါ်တတ်သေးတယ်။
14.	When typing DIR C: at an prompt, the following error occurs: вЂњInvalid Media TypeвЂќ. What is MOST likely the problem?
A.	The driver is supported on that PC
B.	The drive has not been partitioned
C.	The drive has been partitioned, but not formatted
D.	The command typed is not supported to run from the A prompt.
DIR မှာ C: ကိုရိုက်ထည့်လိုက်ရင် вЂњInvalid Media TypeвЂќ ဆိုတဲ့ error ပေါ်လာတယ်။ ဘာကြောင့်လဲ။ ဟာ့ဒ်ဒစ်ကို partition ခွဲတုန်းက မှန်ကန်အောင် drive volume ကိုမပေးခဲ့လို့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ Boot ကို floppy နဲ့လုပ်မယ်ဆိုပြီး သတ်မှတ်ထားတယ်။ ဒါပေမယ့် C: လို့သွားရိုက်နေတော့မှားပြီးပေါ့။ ဟာ့ဒ်ဒစ်အသစ်ကို ပြန်ပြီး format ချမယ် volume တွေကို မှန်အောင်ပြင်ပေးလိုက်မယ်။ Drive ကို partition ခွဲပြီး format ပြန်ချမှ ပြဿနာကို ဖြေရှင်းနိုင်ပါ လိမ့်မယ်။
15.	Ifatechnician gets frequent general protection faults, this could indicate:
A.	Poor quality of memory chips
B.	a hard drive cable connected incorrectly
C.	too much RAM is installed.
D.	incorrect CMOS memory settings.
ပညာရှင်တွေကို မကြာခဏ ပြဿနာတတ်တာကတော့ Memory chip တွေ အရည်အသွေးညံ့နေရင်ဖြစ်တတ် ပါတယ်။
16.	Where is the first place to look whenadevice has failed?
A.	The CMOS	B.	Device Manger
C.	The Device Driver	D.	The Device Firmware
Device တစ်ခု အလုပ်မလုပ်ရင် ပထမဦးဆုံး ဘယ်နေရာကိုသွားကြည့်သင့်ပါသလဲ။
17.	A customer calls and says that their computer is operating very slowly after upgrading from Windows 98 to Windows XP Professional. What two pieces of information are critical in resolving this issue? (Select two)
Windows 98 ကနေ Windows XP ကိုပြောင်းသုံးသူတစ်ယောက်ကနှေးသွားတယ်လို့ပြောနေပါတယ်။ ဒီပြဿနာကို ဖြေရှင်းပေးဖို့နှစ်ချက်လောက်ရှာပေးရပါလိမ့်မယ်။ RAM ပမာဏသိပ်နည်းနေရင်ဖြစ်တတ်သလို၊ processor speed ကသိပ်နှေးနေရင်လည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်။
18.	A computer will not boot, and there are error message saying that вЂњNo Boot Device was foundвЂќ. What isapossible cause of this problem?
A.	BAD Ram
B.	Loose Boot Device cable.
C.	Failed Processor
D.	Failed CMOS Battery
ကွန်ပြူတာ boot မတက်ဘူးဖြစ်နေတယ်။ Error message ကလည်း вЂњNo Boot Device was foundвЂќ လို့ပေါ်နေ တယ်။ ဘာပြဿနာဖြစ်လို့လဲ။ Boot လုပ်ဖို့ပြောထားတဲ့ drive ကိုကြိုးတွေသေသေချာချာ တပ်ထားရဲ့လား ပြန်စစ်ဆေးသင့်တယ်။
19.	After installinganew floppy drive and rebooting the technician notices that the floppy drive light is continuously on and will NOT read floppy disks. What seems to be the problems?
A.	The floppy drive is not configured in the BIOS
B.	The floppy drive data cable is reserved
C.	The floppy drive BIOS driver is the wrong version
D.	There is no problem. The drive light indicates that the drive is spinning up.
Floppy drive အသစ်တစ်လုံးတပ်တယ်။ ကွန်ပြူတာဖွင့်လိုက်တော့ floppy ကမီးတောက်လျှောက်လင်းနေပြီး Floppy ကိုလည်းမဖတ်ဘူး။ Floppy data ကြိုးကို ပြောင်းပြန်ကြီးတပ်ထားပြီးနဲ့တူတယ်။ ပြန်စစ်လိုက်ပါ။
20.	A user complains that the monitor flickers and displays the wrong colors. He noticed this after installing the new speakers near the monitor. What is the most likely cause of the monitor distortion?
A.	The speakers near the monitor are unshielded.
B.	The video card is defective.
C.	The monitorвЂ™s resolution is too low.
D.	The monitorвЂ™s refresh rate is too low.
မော်နီတာကတဖျပ်ဖျပ်လှုပ်ပြီး အရောင်တွေကလည်း မမှန်ဘူး။ စပီကာကိုမော်နီတာနဲ့ကပ်ထားတယ်။ ဒီလိုပုံမှန်အတိုင်း မဟုတ်တာ ဘာကြောင့်လဲ။ စပီကာကိုမော်နီတာနားထားတယ်ဆိုကတည်းကဖြစ်ပြီပေါ့။
11...C , 12...A , 13...A , 14...C , 15...A , 16...B , 17...B,C , 18...B , 19...B , 20...A
အချိန်ရတယ်ဆို ဆက်ရေးပေးပါလို့ လေးလေးစားစား တောင်းဆိုပါတယ် ခင်ဗျာ
21.	A user reports thataPC is experiencing intermittent lockups after installingasound card. There isanon PnP (non plug and play) internal modem installed in addition to the new PnP sound card. The PC BIOS does support PnP devices and PnP aware operating system is installed. What is the most likely explanation for this problems?
A.	The sound card is conflicting with the modem.
B.	The operating system needs to be re-installed.
C.	The BIOS needs to be upgraded.
D.	The system is overheating.
Sound ကတ်ကိုတပ်ပြီးမှ သူ့ကွန်ပြူတာက ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းဖြစ်နေပါတယ်။ သူ့ဘုတ်က ကတ်ကိုထိုးစိုက် လိုက်တာနဲ့ သိနိုင်တာမျိုးလို့ဆိုတယ်။ မိုဒမ်ကတ် တစ်ကတ်ကိုလည်း စိုက်ထားသေးတယ်။ မိုဒမ်ကတ်ကတော့ PnP မဟုတ်ဘူး။ BIOS ကလည်း PnP ကိုသိတယ်။ OS ကတန်းသိနိုင်တယ်။ ဘာကြောင့် သူ့ sound card ကိုတပ်လိုက်မှ ဒီလိုဖြစ်နေရတာလဲ။ Sound Card နဲ့ Modem ပြဿနာတတ်နေလို့ပါ။
22.	Upon power up, the floppy drive’s LED is lit up and stays that way. What is likely cause of the behavior?
A.	A floppy drive cable connection that is on backwards.
B.	Floppy drive failure
C.	Hard drive failure
D.	There is no problems. This is standard behavior.
E.	A disk is left in the floppy drive.
F.	CMOS configuration error
ကွန်ပြူတာဖွင့်လိုက်ရင် ဖလော့ပီ dirve ကမီးတောက်လျှောက်ပွင့်နေတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲ။ ဖလော့ပီ drive ကကြိုးကို ပြောင်းပြန်ကြီးထိုးထားလို့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ပြန်ပြောင်းထိုးကြည့်လိုက်ပါ။
23.	A user wants to listen toaCD onacomputer running Windows 2000. However, when it starts playing there are no sounds from the speakers. A technician checks that the speakers are properly connected and turned on. What is the most likely cause of the problems?
A.	The internal audio cable from the CD-ROM to the sound card is not connected.
B.	The computer can only play MP3 music and not CD audio.
C.	The CD is inserted upside down.
D.	Windows 2000 does not come withaCD player application.
Windows 2000 OS သုံးထားတဲ့သူတစ်ယောက်က CD နဲ့ဖွင့်ပြီး သီချင်းနားထောင်ချင်နေပါတယ်။ ကွန်ပြူတာ ဖွင့်လိုက်တာ စပီကာကနေ အသံမထွက်ဘူးဖြစ်နေတယ်။ စပီကာလည်း ကြိုးတွေပုံမှန်တပ်ထားပြီး ပါ၀ါလည်းဖွင့်ထား တယ်။ ဘာဖြစ်နေလို့လဲ။ CD-ROM နဲ့ sound ကတ်ကို ကြိုးဆက်ပြီးပြီလား။ ပြန်စစ်လိုက်ပါ။
24.	After adding multiple devices toacomputer,auser discovers that the system is shutting down at random times.
ကွန်ပြူတာမှာပစ္စည်းတွေအားလုံးတပ်ပြီးပြီ။ ကွန်ပြူတာဖွင့်ပြီး မကြာမီ ပြန်ပြီးပိတ်သွားတယ်။ ဘယ်ပစ္စည်းက ပြဿနာ ရှာနေတာလဲ။ ပါ၀ါပိုင်းကို ပြန်စစ်ဆေးသင့်ပါတယ်။ ပစ္စည်းတွေကိုလိုတာထက်ပိုပြီးတပ်ထားရင် ပါ၀ါမနိုင်ဘဲ ပြုတ်ကျတတ်ပါတယ်။
25.	A client hasanew PDA that connects to the USB port on the computer. Synchronization works perfectly onalaptop, but “Cannot Find Device” error occurs on the desktop computer. What is the most likely cause?
A.	The PDA is only licensed to work with one computer.
B.	The USB port is disabled or the cable is disconnected.
C.	The hard drive on the desktop has no free space.
D.	The USB cable is connected backwards.
PDA ကိုင်ထားသူတစ်ယောက်က ကွန်ပြူတာနဲ့ USB port ကိုကြားခံပြီးဆက်လိုက်တယ်။ PDA ကလည်းသိတယ်။ ဒါပေမယ့် Cannot Find Device ဆိုတဲ့ error desktop ကွန်ပြူတာမှာပေါ်လာတယ်။ ဘာကြောင့်လဲ။ Desktop ကွန်ပြူတာမှာ USB port ကို disabled လုပ်ထားလို့လည်းဖြစ်နိုင်သလို၊ ကြိုးမတပ်ထားလို့လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
21...A , 22...A , 23...A , 24...D , 25...B
26.	What should be done if the clock on the PC continually resets itself?
A.	replace the CMOS battery
B.	check the motherboard firmware
C.	observe the PC for problems reoccurence
D.	check the motherboard’s oscillator crystal
ကွန်ပြူတာပေါ်က နာရီဟာ သူ့ဘာသာသူ reset မပြတ်လုပ်နေတယ်။ နာရီမမှန်ဘူး ဖြစ်ချင်လည်း ဖြစ်နိုင်တယ်။ ဘာကြောင့်လဲ။ ဘက်ထရီကုန်နေလို့ပါ။ CMOS ဘက်ထရီလေးလဲလိုက်ပါ။
27.	A user complains that the display on the laptop is distorted. When it reboots, the display hasareddish tint that does NOT go away. The technician wiggles the laptop and the display returns to normal. How should the techinician proceed?
A.	reset the cable connection on the LCD
B.	replace the LCD
C.	replace the system board
D.	run diagnostics on the video
Laptop ကွန်ပြူတာကမြင်ကွင်းကရွဲ့စောင်းစောင်းဖြစ်နေတယ်။ ကွန်ပြူတာကို reboot ပြန်လုပ်လိုက်ရင်လည်း အနီရောင်းသန်းသွားပြီးမပျောက်တော့ဘူး။ Laptop ကိုနည်းနည်းလှုပ်လိုက်ရင်ပုံမှန်ပြန်ဖြစ်ချင်ဖြစ်သွားတယ်။ LCD နဲ့ဆက်ထားတဲ့ ကြိုးအပိုင်းကို ပြန်ပြီးစစ်ဆေးဖို့လိုပါတယ်။
28.	A user accurately sets the time in the operating system, but when the PC is rebooted the system time is reset to Jan 1, 1980. What should be done to correct this?
A.	The CMOS battery should be replaced.
B.	The internal system clock should be replaced.
C.	The power supply should be replaced.
D.	The Operating system should be replaced.
OS ထဲမှာသေသေချာချာ နာရီကိုတိုက်ထားတယ်။ ကွန်ပြူတာကိုနောက်တစ်ကြိမ်ပြန်ဖွင့်ချိန်မှာ ၁၉၈၀၊ ဇန်န၀ါရီ ၁ရက်ကိုပဲ ပြန်ပြနေတယ်။ ရက်စွဲမှန်အောင် ဘယ်လိုပြန်လုပ်သင့်သလဲ။ CMOS ဘက်ထရီကြောင့်ပါ။ ဘက်ထရီလဲလိုက်ရင် အဆင်ပြေသွားပါလိမ့်။
29.	What are two main causes of CPU failure? Select two.
A.	overheating from improper heat sink and fan usage.
B.	bent or broken pins from mishandling
C.	buffer overflow from malicious software
D.	incorrect CPU and CPU socket mismatch
CPU ကိုအလုပ်မလုပ်စေတဲ့ အကြောင်းတရားနှစ်မျိုးကိုဖော်ပြခိုင်းပါတယ်။ Heat sink နဲ့ပန်ကာအလုပ်မလုပ်ရင် အပူရှိန်တက်ပြီး အလုပ်မလုပ်ပါဘူး။ တပ်ဆင်ချိန်မှာ Pin လေးတွေ ကွေးကောက်သွားရင်ဖြစ်စေ၊ ကျိုးသွားရင်ဖြစ်စေ အလုပ်မလုပ်ပါဘူး။
30.	A technician installsaSCSI card and three SCSI devces onanew system. The system does not recognize any of the SCSI devices or the controller. What is the most likely cause?
A.	There is an Int 13h conflict.
B.	There isaSCSI ID conflict.
C.	There is an I/O address conflict.
D.	There are no Linux drivers installed.
SCSI ကတ်ကို တပ်ဆင်လိုက်ချိန်မှာ စုစုပေါင်း SCSI နဲ့သုံးရတဲ့ ပစ္စည်းက ၃မျိုးဖြစ်သွားတယ်။ ဒီအချိန်မှာ SCSI ကိုမသိဘူးဖြစ်သွားပြီ။ ဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်ရတာလဲ။ I/O address ကြောင့် ပြဿနာတက်သွားရတာပါ။
26...A , 27...A , 28...A , 29...A,D , 30...C
31. A user addsaserial trackball to his system. Now, neither the existing mouse nor the trackball work. Which of the following will not likely correct the problem?
B. PerformaBIOS upgrade.
C. Reconfigure the COM ports.
D. Reinstall the modern drivers.
Serial trackball တစ်ခုကိုတပ်ဆင်လိုက်ပါတယ်။ မောက်စ်ရော trackball ပါ အလုပ်မလုပ်တော့ပါဘူး။ COM port တွေကိုပြန်ပြီး config လုပ်လိုက်ပါ။
32. A user replaces an old 4GB IDE drive withanew 30GB IDE drive withanew 30GB IDE drive. During the installation process, Linux recognizes only 8GB of the available disk space. Which of the following is most likely the problem?
A. The BIOS does not support larger hard drives.
B. The hard disk controller has no LBA capability/
C. The value of the hard disk size in the CMOS is set incorrectly.
D. The hard disk has to be low-level formatted to access the full capacity.
ယခင် 4GB IDE drive နေရာမှာ နောက်ထပ် 30GB အသစ်တစ်လုံးကို အစားထိုးပြီး တပ်ဆင်လိုက်ပါတယ်။ OS ကို Linux တင်လိုက်တော့ 4GB ပဲသိတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲ။ ကျန်တာတွေ ဘာကြောင့်ပျောက်သွားရတာလဲ။ အဲဒီ BIOS ကကြီးတဲ့ ဟာ့ဒ်ဒစ်တွေကို support မလုပ်လို့ပါ။
33. A new PC is delivered to the site. Upon the initial power up, there is no video display and no beeps are heard, but the hard drive and fans power up. Which of the following has most likely caused this problems?
A. The mouse is not connected.
B. The diskette drive has failed/
C. The CPU is not seated properly.
D. The network card is not installed.
ကွန်ပြူတာအသစ်တစ်လုံး၀ယ်လာတယ်။ ပါ၀ါကိုဖွင့်လိုက်ချိန်မှာ မော်နီတာကိုလည်းတက်မလာဘူး။ ဘာအသံမှလည်းမကြားရဘူး။ ဒါပေမယ့် ဟာ့ဒ်ဒစ်အသံနဲ့ပန်ကာလည်သံတွေတော့ ကြားနေရတယ်။ CPU ကိုတပ်ဆင်ထားတာမသေချာလို့နေလိမ့်မယ်။ ပြန်စစ်ကြည့်ပါ။
34. Which of the following canaparity error indicate?
A. A DIMM is failing.
B. The IDE hard drive is corrupt.
C. The IRQ setting are incorrect.
D. The software is not compatible with the hardware.
Parity error ဖြစ်နိုင်သော DIMM ကြောင့်ပါ။
35. Linux is being installed onasystem that uses SCSI hardware. During partitioning, an error is produced that says there are no valid devices found on which to install partitions. The hard drive spins up. The SCSI controller is functioning properly and supported by Linux. The cable isaknown good cable and there is proper termination. What is the problems?
A. The SCSI hard drive is not jumpered to the proper SCSI ID.
B. The SCSI controller needs to be reset to factory defaults.
C. The SCSI controller on the hard drive needsafirmware update.
D. The SCSI controller on the hard drive has an intermittent problem.
SCSI ဟာ့ဒ်၀ဲကို Linux နဲ့တွဲသုံးမယ်။ Partition ခွဲချိန်မှာ Install လုပ်ဖို့ partition မတွေ့ဘူးလို့ပြောနေတယ်။ ဟာ့ဒ်ဒစ်ပျောက်နေတယ်။ Linux က SCSI ကိုလည်း support လုပ်ပါတယ်။ Cable လည်းကောင်းတယ်။ ဘာကြောင့်လဲ။ SCSI ဟာ့ဒ်ဒစ်ကိုကို jumper မချိုးထားလို့ပါ။
31...C , 32...A , 33...C , 34...A , 35...A
36.	A user installedanew hard drive intoasystem with an existing hard drive. He then connectedaribbon cable to the new hard disk. He powered on the computer, but the system did not boot. Which of the following most likely caused the problem?
A.	The hard disk needsanew MBR.
B.	The hard disk drive was not low-level formatted first.
C.	The controller was damaged by an electrical discharge.
D.	The ribbon cable was insered backward on the hard disk.
လက်ရှိဟာ့ဒ်ဒစ်တစ်လုံး သုံးနေရာကနေ နောက်ထပ်ဟာ့ဒ်ဒစ်အသစ်တစ်လုံး ထပ်တပ်တယ်။ ကြိုးတစ်ချောင်းတည်းမှာ နောက်အသစ်တစ်လုံးကိုတပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ကွန်ပြူတာဖွင့်တယ်။ System က boot မလုပ်ဘူးဖြစ်နေတယ်။ ဘာကြောင့်လဲ။ ကြိုးပြောင်းပြန်တပ်ထားသလား။ ပြန်စစ်ကြည့်ပါ။
37.	Which of the following are important troubleshooting questions to askauser when gathering information about an issue? (Choose two)
A.	Who caused this issue?
B.	When did this issue begin?
C.	How much did your computer cost?
D.	Where did you buy your computer?
E.	What were you doing when the issue began?
ကွန်ပြူတာပျက်လို့ ပြင်ရတော့မယ်ဆိုရင် အရေးကြီးဆုံးမေးသင့်တဲ့ မေးခွန်းနှစ်မျိုးကိုရွေးပေးရပါမယ်။ မေးသင့်တာက ဘယ်အချိန်မှာစဖြစ်တာလဲနဲ့ ပြဿနာမဖြစ်ခင်ဘာလုပ်လိုက်မိသလဲဆိုတာ အမေးသင့်ဆုံးပါ။
38.	You areatechnician at Certkiller. Your newly appointed Certkiller trainee wants to know what should be used to extinguishacomputer fire. What would your reply be?
A.	A Fire hose
B.	A Class A extinguisher.
C.	A Class C extinguisher.
D.	A silver foam water Extinguisher.
ကွန်ပြူတာမီးလောင်ရင်ဘာနဲ့ငြိမ်းသတ်ရမလဲလို့ မေးထားတာပါ။ မီးလောင်ရင် မီးငြိမ်းသတ်တာကို Class နဲ့သူတို့ဆီမှာခွဲပါတယ်။ Class A ဆိုတာက သစ်သား၊ အ၀တ်စ၊ ရာဘာ၊ စက္ကူ၊ ပလပ်စတစ်တွေလောင်ရင်ငြိမ်းသတ် ရတာပါ။ Class B ဆိုတာ ဓာတ်ဆီ၊ ဒီဇယ်ဆီ၊ ရေနံဆီ၊ စာသုံးဆီ၊ သုတ်ဆေး၊ သဘာ၀ဓာတ်ငွေ့၊ ချောဆီစတာတွေကို လောင်ရင် ငြိမ်းသတ်ရတာပါ။ Class C ဆိုတာက Class A, B တို့နဲ့ဆက်စပ်နေတဲ့ အခြားသတ္တူပစ္စည်းတွေနဲ့ အီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်း၊ ၀ါယာကြိုးတွေအပြင် မီးလောင်မှုကိုအားပေးစေနိုင်တဲ့ ပစ္စည်းတွေကိုငြိမ်းသတ်ရာမှာ သုံးပါတယ်။ Class D ဆိုတာ ဓာတ်ပြုပစ္စည်းတွေဖြစ်တဲ့ ဆိုဒီယမ်၊ မဂ္ဂနီယမ်၊ ပိုတက်ဆီယမ်တွေမီးလောင်ရင် အသုံးပြု ရတယ်။ ကွန်ပြူတာ မီးလောင်ရင် Class C နည်းနဲ့မီးငြိမ်းသတ်ရပါတယ်။
39.	You are servicingacustomerвЂ™s computer. What would you use to clean the circuit board contacts?
A.	JewelerвЂ™s cloth.
B.	Silicone spray.
C.	An enmy cloth.
D.	Contact cleaning solution.
ဆားကစ်ဘုတ်ပတ်လမ်းတွေကို သန့်ရှင်းရေးလုပ်ချင်တယ်ဆိုတဲ့သူကို ဘာနဲ့သန့်ရှင်းဖို့အကြံပြုမလဲ။
40.	A user receive an e-mail from someone they did NOT know with an attachment as they did NOT recognize. They deleted the e-mail after they opened it. Now the computer response is slow and has frequent lockups. What is the BEST course of action to troubleshoot the problem?
A.	Leave the computer unplugged for 2hours.
B.	Re-install the e-mail client.
C.	Update the antivirus software and scan for viruses.
D.	Update the BIOS version.
မသိတဲ့သူထံကနေ အီးမေးလ်တစ်စောင် attachment နဲ့အတူရောက်လာပါတယ်။ မဖွင့်ဘဲ delete လုပ်လိုက်တယ်။ ကွန်ပြူတာနှေးသွားပြီး မကြာမကြာရပ်သွားတယ်။ ဘာဆက်လုပ်သင့်သလဲ။ ဗိုင်းရပ်စ်ဆော့ဖ်၀ဲကို update လုပ်ပြီး၊ ဗိုင်းရပ်စ်ကို scan လုပ်သင့်ပါတယ်။
36...D , 37...B,E , 38...C , 39...C , 40...C
Network နဲ့ ပတ်သက်ပြီးလည်း ရေးပေးပါဦး:cool:
network နဲ့ပတ်သက်ရင် အောက်ကလင့်မှာယူလိုက်ပါ။
အဲဒီ စာမေးပွဲက ဘယ်မှာ ဖြေ၇တာလဲဗျ မသိလိုပါ ဗျာ အမှားပါ၇င်ခွင့်လွတ်ပါဗျာ
ကိုစာရိတ္တမောင်ပြောတာက A+ ကိုပြောတာလား။ network ပိုင်းကိုပြောတာလား။ နှစ်မျိုးစလုံးကိုပြောတာလား။
ဟုတ်တယ်အစ်ကို A+ & Network + အတွက် သင်တန်းရယ် စာမေးပွဲရယ်.. အသေးစိတ်ပြောပြပေးပါလား..
ကျနော်ကို တချက်လောက် အောက်ကမေးခွန်းလေးတွေကို ဖြေပေးပါခင်ဗျာ
မြန်မာလိုလေးဘာ ဘာကြောင့် အဖြေရတယ် ဆိုတာလေးကိုပါရှင်းပြပေးပါခင်ဗျာ။
1.[FONT=&quot] [/FONT] 1.[FONT=&quot] [/FONT]What RAID level provides the fastest access times with no fault tolerance?
2.[FONT=&quot] 2. [/FONT]RAID level 1 is more commonly known as _________ .
B.[FONT=&quot] [/FONT]Striping with parity
3.[FONT=&quot] [/FONT]What is the minimum number of hard disks required for RAID 5?
4.[FONT=&quot] [/FONT]What are the differences between disk duplexing and disk mirroring? (Choose all that apply.)
A.[FONT=&quot] [/FONT]Disk duplexing use one controller card, whereas mirroring uses two.
B.[FONT=&quot] [/FONT]Disk duplexing uses two controller cards, wheres mirroring uses one.
C.[FONT=&quot] [/FONT]Disk duplexing is slower because it uses only two disks, whereas mirroring uses three.
D.[FONT=&quot] [/FONT]Disk duplexing is faster because it uses three disks, whereas mirroring uses two.
E.[FONT=&quot] [/FONT]Disk dupexing can haveacontroller fail and not lose access to data.
F.[FONT=&quot] [/FONT]Mirroring can haveacontroller fail and not lose access to data.
5.[FONT=&quot] [/FONT]A full backup does what to the archive bit onceabackup has completed?
A.[FONT=&quot] [/FONT]Clears it
B.[FONT=&quot] [/FONT]Activates it
C.[FONT=&quot] [/FONT]Does nothing
D.[FONT=&quot] [/FONT]Sets it to 100
E.[FONT=&quot] [/FONT]Resets it to 1000
6.[FONT=&quot] [/FONT]In which type of backup do you useamaximum of two backup sessions to restoreafile oragroup of files?
7.[FONT=&quot] [/FONT]An incremental backup copies ______________________ to tape.
A.[FONT=&quot] [/FONT]Data files only
B.[FONT=&quot] [/FONT]Operating system files only
C.[FONT=&quot] [/FONT]Files with the archive clear
D.[FONT=&quot] [/FONT]Files that have changed since the last full backup only
E.[FONT=&quot] [/FONT]Feles changed since the last full or incremental backup
8.[FONT=&quot] [/FONT]Which type of backup tape has the greatest capacity?
9.[FONT=&quot] [/FONT]Striping can be done in two ways: with and without_________.
10.[FONT=&quot] [/FONT]Duplexing is different from mirroring, because in duplexing, each hard drive has its own__________.
ကျွန်တော်လည်း သိချင်တယ်ဗျ .. ဘယ်မှာဖြေ၇တာလဲဆိုတာ ... သိတဲ့လူများ ပြောကြပါဦး..